Isitifiketi Sokuxhumana Komphakathi Nokuqeqeshwa
NgoLwesithathu, Novemba 11, 2020 NgoLwesithathu, Novemba 11, 2020 Douglas Karr
Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi ngibe ngumsebenzisi wamandla nenxusa le- I-Agorapulse. Ungachofoza ku-athikili ephelele, kepha ngizovele ngiphinde ngithi yiyona nkundla elula yokuphathwa kwezokuxhumana emakethe. I-Agorapulse ihlanganiswe ne-Twitter, Facebook, amakhasi e-Facebook, i-Instagram kanye ne-Youtube.
Le nkampani iyamangalisa, futhi, ihlinzeka ngokuhamba njalo kwamathiphu, amasu, nezithuthukisi selokhu yasungulwa. Enye insiza emnandi u-Agorapulse anayo yisikole sabo lapho bakunikeza khona isifundo sesitifiketi esifaka ukushicilelwa kwezenhlalo, ukuphathwa kwezokuxhumana nabantu, ukulalela imithombo yezokuxhumana nokubika imithombo yezokuxhumana.
Imfundo Yezokuxhumana Nokuqeqesha
I-Agorapulse Academy ilungele ochwepheshe bezentengiso abasha emithonjeni yezokuxhumana noma abafuna ukwengeza ulwazi lwabo olukhona nge-courseware esesikhathini. Okuhle kunakho konke, lesi sikhungo Isinqamuleli (leso yisidlaliso sesifundo) esihlanganisa ipulatifomu namasu inkampani yakho noma abasebenzi abadinga ukuthi baphumelele.
Isifundo sihlanganisa amavidiyo nabaholi bemboni, izinto zokufunda, bese sikudlulisa ngokusebenzisa isu noma isu ngaphakathi kwepulatifomu ye-Agorapulse. Nazi izahluko:
Amathuluzi Okushicilela Komphakathi - lesi sahluko sifaka ukushicilela kuphrofayli eyodwa noma amaningi, ukuhlela nokuphatha okuthunyelwe okuhleliwe, ukwakha amaqembu wokushicilela wangokwezifiso, ulayini nokuphatha okuthunyelwe kolayini, ukulayishwa kokuqukethwe kwenqwaba, ukuhamba komsebenzi weqembu, amakhalenda abiwe, ukusebenzisa amalebula okubika, nokusebenzisa uhlelo lweselula nokunwetshwa kwe-chrome .
Ukuphatha Izingxoxo Zomphakathi - ibhokisi lokungenayo lezokuxhumana, ukuqoqa ukuphawula kwesikhangiso, ukuthatha izinyathelo ngezihlungi, izimpendulo nokubuyekeza, ukugcina izimpendulo, ukufaka ilebula, ukubekisa, ukufihla nokunikeza izimpendulo, usebenzisa umsizi webhokisi lokungenayo, kanye nabasebenzisi be-profiling.
Ukubikwa Kwemidiya Yezenhlalo - imibiko yokubuka, ukuthumela imibiko, ukusebenza ngamalebula, nokwakha imibiko yamandla.
Ukulalelwa Kwemidiya Yezenhlalo - Ukulalela ngenethiwekhi yezokuxhumana (ngaphandle kwe-Facebook ne-LinkedIn engeke ikuvumele), ukuqapha nokuvuselela imizwa, ngokushiwo kwephrofayili yakho, ngokushiwo okungekho emthethweni, noma ngegama elingukhiye, nge-URL, kanye nokuphatha imiphumela yakho yokulalela.
Izahluko ngasinye siphela kumibuzo yokuzijwayeza (engathinti isivivinyo sakho sesitifiketi) kepha sikunikeze ngolwazi ongafisa ukuphinda uluthathe. Kukhona nemisebenzi enconyelwe ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Agorapulse ongayithatha.
Lokhu kuhlolwa kwesitifiketi kuvivinya ulwazi lwakho lwezinto ezibalulekile ze marketing media social ukuthi bonke abasebenza ezinkundleni zokuxhumana bazi. Ukuphasa lesi sivivinyo nokuthola isitifiketi sakho kuzokuvumela ukuthi ubonise amakhono akho nobuchwepheshe emithonjeni yezokuxhumana futhi empeleni ube ngudokotela ne-Agorapulse.
Ngithathe isifundo namuhla futhi Ngingumchwepheshe (we-Agorapulse ngokusemthethweni)!
Bhalisela Manje i-Agorapulse Academy
Ukudalulwa: NgiyiNxusa le-Agorapulse kanye neNhlangano.
Tags: ukunika isitifiketiisitifiketi semidiya yezenhlaloamakilasi ezinkundla zokuxhumanainkambo yezokuxhumanaimfundo yezokuxhumana
I-Software as a Service (SaaS) Churn Rate Statistics ka-2020
Okthoba 25, 2011 ngo-5: 46 AM